‘जाडोमा बालिबालिकालाई घरमै बनाइएका तातो झोलिलो खानेकुरा खुवाऔं’ | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ 21
चिसो मौसममा अन्य बेलाभन्दा बालबालिकाहरू बढी जोखिममा हुन्छन्। मौसम परिवर्तनको बेलामा बालबालिकामा आउन सक्ने समस्याबारे थाहाखबरकर्मी संजय रेग्मीले पर्वत अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डा. कुशल बरालसँग गरेको कुराकानी ः
सामान्यतः यो बेलामा सिजनल भाइरल फ्लु‚ जसलाई हामी मौसमी रुघाखोकी भन्ने गर्छौँ, सबैभन्दा बढी समस्या यसैको हो। भाइरसका माध्यमबाट फैलिने यसले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्दछ। जुन धेरै बालबालिकामा देखिएको समस्या हो। सिँगान बग्ने, खोकी लाग्ने र ज्वरो आउँछ। त्यो बेलामा खान मन नलाग्दा बालकबालिकाहरू शिथिल बन्छन्। ज्वरो २÷३ दिनसम्म रहन सक्छ, खोकी अलि लामो समय लाग्न पनि सक्छ। अर्को छालामा डाबर पनि देखा पर्न सक्ने, कहिलेकाहीँ ज्वरो र कामज्वरो आउने समस्या पनि देखिन सक्छन्।
त्यसका लागि त झोलिलो कुरा जस्तै– दालको रस, सुप, आवश्यक मात्रामा उमालेको पानी खुवाउनुपर्छ। त्यस सँगसँगै सिटामोलको झोल खुवाएपछि ज्वरो नियन्त्रणमा आउने सम्भावना रहन्छ। तर‚ धेरै ज्वरो आए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ। धेरै खोकी लागिरहेको छ भने त्यो बेलामा बालबालिकाको लागि मह र पानी मिसाएर खुवाउनु राम्रो हुन्छ। तर‚ बालबालिका खेल्दै खेलेन, धेरै लुसो खालको बन्यो, खाँदै खाएन, पिसाब गरेको छैन भने स्वास्थ्य अवस्था झनै गम्भीर बन्न सक्छ। त्यो अवस्थामा घरेलु उपचारले होला कि भनेर कुरेर बस्नु हुँदैन।
दाल, गेडागुडी, फलफूल, हरिया सागपात, माछा, मासु, अण्डा, घिउलगायतमा खानेकुरामा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। जति बेला पनि भातमा मात्रै जोड दिँदा अन्य तत्त्वको अभाव हुन्छ। जसका कारण बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ। जसको दीर्घकालीन असर रहन्छ। सन्तुलित खाना मिलेन भने बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास उमेरको अनुपातमा नहुँदा बालबालिका कमजोर हुने र उन हरेक कुरामा सक्रिय नहुने समस्या आउँछ। संजय रेग्मीले थाहा खबरमा लेखेका छन्।
चिसो मौसममा हरेक दिन २ केस्रा लसुन !!
कागती खानुको यती धेरै फाईदा तपाईंलाई थाहा छ ?